Cicadas nke afọ 17 na-abanye n'ụsọ oké osimiri East, oge iji nwalee nri nri ahụhụ nwere protein dị elu? - Ibi ndụ ahụike 2022
Cicadas nke afọ 17 na-abanye n'ụsọ oké osimiri East, oge iji nwalee nri nri ahụhụ nwere protein dị elu?
Afọ 17 echere agwụla maka otu n'ime ahụhụ kacha eme mkpọtụ n'ụwa. Ọtụtụ ijeri cicadas na-abịarute n'oge opupu ihe ubi n'akụkụ East Coast n'oge maka oge mmekọ.
N'adịghịkwa ka ìgwè igurube, ụmụ ahụhụ ndị a abụghị ọrịa na-efe efe. N'ezie, ha bụ isi iyi nke protein dị elu na obere carbs nke ị nwere ike iri nri n'oge okpomọkụ a.
Cicadas apụtalarị na New Jersey na North Carolina. N'ịbụ ndị na-eme mkpọtụ, na-ada ụda nke nku ha na afọ afọ ha, ọ na-esiri ha ike ịtufu.
"Mgbe e nwere ọtụtụ n'ime ha ọnụ, ọ dị ka nke a na-emegharị ụda. Ọ na-ada ụda dị ka ndị na-efe efe na-efe efe site na ihe nkiri 1950, "Chris Simon, prọfesọ nke ecology na evolutionary biology na Mahadum Connecticut, gwara Reuters.
Ma ka ha na-amalite ịpụta, ị ga-ahụ ha "n'akụkụ osisi, n'akụkụ ụlọ, na shrubbery-ọbụna na taya ụgbọ ala," ka ọ gbakwụnyere.
Ndị ọkà mmụta sayensị si Connecticut na-atụ anya nnukwu cicadas nke oge site na Brood II, nke a na-ewere dị ka otu n'ime ihe mkpofu kasị ukwuu n'ebe ọwụwa anyanwụ North America. Ndị ọkachamara enyochala ụmụ anụmanụ ndị a kemgbe 1843, ndekọ kacha ọhụrụ bụ na 1979 na 1996.
Otu ụdị nke Brood II, Magicicada, dị oke oke, na-agbatị iri puku kwuru iri puku ruo 1.5 nde kwa acre. Ndị na-eme nchọpụta kweere na cicadas bara ụba na-eme ka o siere nnụnụ, anụ anụ, na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ ike ịgbawa.
Ma ọ bụghị nanị ha nwara ihe ndị a e kere eke. Ụfọdụ ụmụ mmadụ adịghị eme ihere maka ire ma ọ bụ iri ụdị ụmụ ahụhụ ahụ. Ndị na-eri ahụhụ na-akọwa ndị nkatọ ndị a dị ka nutty na crunchy, ebe ndị ọzọ na-akpọ ụmụ ọhụrụ ahụ dị nro. Otú ọ dị, cicadas abụghị maka onye ọ bụla, n'ihi na ha nọ n'otu ezinụlọ dị ka shellfish, nke pụtara na ndị nwere allergies kwesịrị ịnọpụ.
A na-atụ anya na cicadas ga-erute n'elu ala n'etiti ngwụcha Eprel na mbido June, na-agbapụta dị ka ndị na-eto eto, ma rịgoro ma ọ bụ fega n'osisi na ụlọ na-achọ ndị òtù ọlụlụ.
Oge cicada nwere ike imeghe ọtụtụ ụzọ maka ntụzịaka ọhụrụ, mana ọ dịịrị gị ka ị were nri na-edozi ahụ ma nwalee ya. Ndị ọkachamara na Cicada na-ekwu na nymphs, ma ọ bụ ndị na-eto eto, dị mma iji rie raw ma ha pụtachara. Cicadas ndị okenye chọrọ isi mmiri iji wepụ nje bacteria niile, ebe a ga-ezere cicadas nwụrụ anwụ n'ihi na ha na-ere ere.
Ụzọ na-ewu ewu iji kporie ndụ ndị a bụ ka cicadas kpuchiri chọkọletị dị ụtọ. Mahadum Maryland mekwara nri dị iche iche na cicadas, gụnyere dumplings na fry fry, maka ndị na-enwe ntakịrị nnwale.